UXiaomi uya kusebenzisa kuphela izikrini ezincinci kwisiphelo esisezantsi | I-Androidsis
Okwangoku sibona ukuba ii-smartphones ze-Android zisebenzisa ngakumbi izikrini ezinkulu. Uninzi lweemodeli zisebenzisa okwangoku izikrini ezinkulu kunee-intshi ezi-6, kuninzi lweendawo zayo. UXiaomi naye ujoyine oku kusetyenziswa kwezikrini ezinkulu, njengoko sele sibonile kwiimodeli zayo zamva nje, njengoMi 9 o Inqaku leRedmi 7.
Kubonakala ngathi oku kuya kuba yinto engagungqiyo kwiimodeli zomenzi waseTshayina. Yayingumongameli wenkampani ophume weza kuthetha ngayo. Kuba basandula ukusishiya ngeXiaomi Mi 9 SE, Isikrini esingaphantsi kweesentimitha ezi-6 kancinci. Kuxhomekeka kuhlobo lophawu, oku kuya kuba ngumahluko kungekudala.
Ubuncinci kwinqanaba layo eliphakathi, eliphakathi kunye neliphezulu. Kuba uXiaomi ugcina ukusetyenziswa kwescreen esincinci, esingaphantsi kweesentimitha ezi-6, kwiimodeli ezikuluhlu lwazo lokufaka. Kweli candelo lentengiso sisaqhubeka ukubona iifowuni ezivela kumenzi waseTshayina kunye nobukhulu bekhusi.
Ke i Phezulu kuluhlu lwegama laseTshayina luya kwenza izikrini ezinkulu. Le yinto ayithethileyo umongameli wenkampani eposini kwinethiwekhi yoluntu yaseTshayina uWeibo, njengoko kuchaziwe kwimithombo yeendaba eyahlukeneyo. Ubhejo olucacileyo lophawu, lokusetyenziswa kwezikrini ezinkulu.
Isizathu kukuba abasebenzisi babuze ngakumbi nangakumbi malunga noku. Bafuna ibhetri enkulu, izikrini ezinkulu, ukongeza kwiikhamera ezingcono okanye ubukho be5G. Le yinto efuna indawo kwifowuni. Ukuze ukwazi ukunikela, iXiaomi iya kusebenzisa izikrini ezingaphezu kweesentimitha ezi-6 kwezi modeli.
Ke kwiinyanga ezimbalwa ezizayo, ii-smartphones zorhwebo lwaseTshayina ezifika kumacandelo aphezulu, Baya kuba nezikrini ezinkulu. Okwangoku asinayo idatha kwiimodeli abaza kuzimilisela, kodwa kubonakala ngathi oku kuzinikela kubo kuyacaca. Ucinga ntoni ngesi sigqibo sophawu lwesiTshayina?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » UXiaomi uya kusebenzisa izikrini ezincinci kuphela kuluhlu olusezantsi